Kuunza iyo WordPress Image Rotator Widget | MarTech Blog
Chitatu, December 14, 2011 Chipiri, May 3, 2016 Douglas Karr
DK New Media anga aine iyi WordPress plugin pane yekumashure-kupisa kwenguva yakati. Iko kudiwa kweiyo yakapusa, yemhando yemufananidzo rotator plugin yaive yakakwira kwete chete kune vedu vatengi, asiwo nharaunda yeWordPress. Iwo ma plugins andaive ndawana anovimbisa kuita zvataida angave akatyoka kana aisashanda zvachose. Saka takagadzira zvedu.
Dhawunirodha kana Isa iyo Mifananidzo Rotator Widget
Iyo yekutanga vhezheni yakanga yakashata, uye nekudaro haina kuzombowedzerwa kuIzwi rePlagi Rekuchengetedza. Aesthetics yanga isiri iyo yega nyaya: iwe waigona kungomhanya kamwechete ipapo pa peji, paive nenzvimbo mbiri dzakasiyana uko masetitendi aifanirwa kugadziriswa, ndakataura here kuti yaive yakaipa?
Iyo rotator inouya netatu shanduko: Linear, Loop, uye Fade. Linear ichapururudza iyo mifananidzo yakatwasuka mhiri kwemudziyo wayo. Kamwe iyo yakatenderera rotator yasvika kumagumo emifananidzo, inozodzosera kumashure uye kupururudzira iyo yakapesana nzira. Loop rotator akatenderera: kana mufananidzo wekupedzisira wasvika, mufananidzo wekutanga mune iyo runyorwa uchaonekwa unotevera, uye chiuno chinotanga pamusoro. Kupera kuchadzima chifananidzo chimwe nechimwe mukati uye chifananidzo chimwe nechimwe chiri kunze.
Iyi shanduko yanga isiri yedu hombe nyaya hazvo. Yaiva magadzirirwo. Icho chaive chikamu chakashata, asi panguva ino takaita chimwe chinhu chakanakisa. Taiziva kuti maitiro ekuwedzera mifananidzo ku rotator yaida kuve nyore. Bhatani rakajeka "+" rinokumbira WordPress 'Media dialog. Kubva ipapo, vashandisi vangasarudza kuisa chifananidzo chitsva, kana kusarudza chifananidzo chakaiswa kare kubva kuMedia Library, sezvavaizoita dai vaiisa chifananidzo. Mushure mekunge mufananidzo wapedza kurodha kana mushandisi asarudza mufananidzo, vanofanirwa kudzvanya bhatani "Tumira kuMufananidzo Rotator". Kana zvese zvifananidzo zvaidiwa zvaiswa, zviri nyore chaizvo kugadzirisa.
Kufamba pamusoro pezita remufananidzo kucharatidza turu yekushandisa ine mufananidzo. Isu hatina kuda kuumbiridza marongero ewidget, saka takafunga kuti kurodha mifananidzo yese mumudziyo wegadziriro yakanga isiri sarudzo. Sarudzo yedu yekuisa iyo mifananidzo muchiono cheturu rekushandisa chakabhadharwa zvakapetwa kaviri: vashandisi havafanirwe kumirira kuti mifananidzo itakure zvisati zvagona kugadzirisa, kurongazve, nezvimwe…; uye zvakachengetedza chimiro chedu chakachena, izvo zvinoita kuti zvive nyore kurongedza uye kubviswa.
Kugadziridza kuri nyore sekudzvanya pane isina chinhu nzvimbo mukati meiyo runyorwa rwechinhu chinhu uye uchichiendesa kune chaunoda chinzvimbo. Fungidzira kuti izvi zvingadai zvakave sei dai takatakura zvifananidzo (zvese zvine zviyero zvakasiyana) takananga mumudziyo wegadziriro.
Kuti ubvise chifananidzo kubva kuwijeti, tinya bhatani "-" riri padyo nemufananidzo waunoda kubvisa. Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kudzvanya "Sevha" kana kuti hapana cheiyi shanduko ichaitika.
Kana iwe ukapa iyi plugin kumhanya, ndapota inzwa wakasununguka kusiya chero mhinduro, bugs, kana mhinduro mune iyo WordPress maforamu ekutsigira(isu tinoongorora izvi) kana na kutaura nesu zvakananga.
Tags: DK New MediamufananidzoMufananidzo RotatorMufananidzo SliderBairiraRotatorSliderWidgetWordPressWordpress pluginWordPress Widget
Unofanira Bhizinesi Rako kuve pa Twitter?
Dec 14, 2011 pa 10: 41 AM
Saizi yemifananidzo inoshanda sei? Ini ndinoona kuti iro rekuisa bhokisi rinoti 200 × 200. Ko kana mufananidzo wangu uri wezviyero zvakasiyana?
Dec 15, 2011 pa 1: 10 AM
Ini ndinofunga izvo zvaizowedzera nzira zvakanyanya kuomarara kune iyi plugin. Uye hazvingatarisike sezvakanaka nekuti zvinogona kunge zvisina kunyatsotenderedzwa zvakatwasuka, zvinogona kuwana pikisheni, nezvimwe.Sezvamunofanira kuita kuti ukure mifananidzo nenzira inokwana kuposita, mushandisi anofanirwa kuiseta mushe pano.
Zvita 14, 2011 na6: 06 PM
Dhifaidhi yakaenzana zviyero zvinoshanda, zvisinei kukwirira zviyero hakuite. Kubva ikozvino, kuti uwane zvakanakisa kubva pawijeti, iwe unofanirwa kugadzira iyo yese mifananidzo yaunoronga kushandisa iyo yakafanana kukwirira.
Mukusunungurwa kunotevera ndichave ndichiwedzera masendimita masetingi kune iyo widget. Iwe unozogona kusarudza iyo upamhi uye kukwirira kweiyo yakazara widget, uye nekudaro iyo mifananidzo ichadzoserwa zvinoenderana nayo.
Dec 15, 2011 pa 1: 08 AM
@coleydotco: disqus basa rinoshamisa pane iri #WordPress #Plugin. Ini ndinochida kwazvo!
Ndira 5, 2012 na3: 04 PM
Iko kune here kana ichave iri nzira yekubatanidza iyo mifananidzo kune yakatarwa yekumhara peji kana wadzvanywa?
Ndira 5, 2012 na6: 09 PM
Kwete, Bethany… asi isu tiri kuronga kuburitsa icho sechinhu mune inotevera kuburitswa!
Sep 4, 2012 pa 10: 24 AM
@BethanyBey: disqus iyo plugin yakagadziridzwa kuisa iyo chinongedzo!
May 21, 2013 pa 2: 34 PM
Isu takagadzirawo zvimwe zvacho svondo rino zvakagadzirisa zvimwe zvekubatanidza zvinhu. @BethanyBey: disqus
Jan 19, 2012 pa 5: 04 AM
Ida izvi - zvinonyatso shandisa kana zvabatanidza uye iwe unogona kuita shanduko nguva yekuchinja. basa rakanaka vakomana - ndatenda
Ini ndinonyatsoda kushandisa iyi plugin, asi kana ini ndikaisa chifananidzo, ini handiwane 'tumira mufananidzo kune rotator widget' mukana, chete zvakajairika 'kuisa kutumira'.
Ini ndakadzima uye ndikadzorera iyo plugin, asi kusvika parizvino hapana rombo rakanaka. Ndokumbirawo mundibatsire kunze?
Ini ndawedzera skrini, uye eventhough iri muchiDutch iwe unofanirwa kugona kuona kuti iyo 'tumira mufananidzo ...' bhatani isipo. Ndingafarire kwazvo rubatsiro rwako.
Feb 13, 2012 at 10:29 PM
Ini ndinogona kungofungidzira kuti zvinoda kuti isu tigadzire dudziro faira. Iwe unogona here kutiudza isu chii "kutumira mufananidzo kune rotator widget" iri muchiDutch? Isu hatisi kuronga kuburitsa munguva pfupi, asi tichaedza kutsveta izvi mukati.
Ndatenda kwazvo nemhinduro yako inokurumidza. Shanduro chaiyo ingave 'invoegen mumufananidzo rotator widget'.
Ndinovimba chaizvo kuti izvi zvinoshanda. Kune rimwe divi, ini ndaisada kushandisa iyo 'tumira mufananidzo kune rotator widget' muChirungu kana izvozvo zvaizogadzirisa dambudziko.
Kukadzi 13, 2012 na2: 40 PM
Ndine nzvimbo dzinoverengeka dzeWP dzinomhanya, saka ndakaedza ino rotator yemufananidzo muchirungu vhezheni, uye inoshanda mushe. Nekudaro, ini ndinofunga uri kutaura chokwadi, izvi zvine chekuita neshanduro. Zvingave zvakanaka kana iwe ukakwanisa kutenderera kuti uvake dudziro kumwe kunhu munguva pfupi iri kutevera. Kana muchindida kuti ndishandure zvakawanda kubva kuChirungu kuenda kuDutch, ndichafara kubatsira.
Mumwe mubvunzo: pane nzira yekudzvanya pikicha kuti igare, kuti vanhu vakwanise kuverenga chinyorwa chandakawedzera? Kana muchiuno, zviite zvishoma kukurumidza?
Apr 22, 2012 pa 12: 47 PM
Izvi zvino zvaiswa nenzvimbo yemusoro wenyaya! Yedu inotevera chirongwa ndeyekuona kana isu tisingakwanise kutora anchor maaki kubva kune midhiya raibhurari uploader kuti iiswe.
Apr 25, 2012 pa 9: 18 AM
Widget iyi yakanaka uye yakapusa uye sarudzo yekuwedzera zvinongedzo kumifananidzo ingave yakanaka. Ndakaongorora zvirevo zvekare ndikaona kuti chinhu ichi chakakumbirwa nevashandisi vashoma 3 mwedzi yapfuura Ndinovimba iwe uchakwanisa kuzvibatanidza munguva pfupi.
Apr 25, 2012 pa 9: 34 PM
Zvita 30, 2013 na12: 26 PM
Kwete chokwadi kana iwe waona kuti izvi zvakawedzerwa.
Apr 29, 2012 pa 9: 50 PM
May 7, 2012 pa 12: 55 PM
Neimwe chikonzero pane> hunhu padyo nemufananidzo. Zvikasadaro zvinoshanda zvikuru.
Sep 4, 2012 pa 10: 23 AM
Izvo zvakagadziriswa @ google-71556138c8611ea275e4be4f3e34b930: disqus!
Hei mose! Isu takagadzirisa plugin kuti isanganisira iyo yekubatanidza nzira!
Gumiguru 23, 2012 na3: 29 PM
Ini ndinoda iyo plugin uye iri kundoshanda kwazvo kwandiri. Wangu mumwe mibvunzo, pane nzira here yekuti chinongedzo chivhure muhwindo idzva?
Gumiguru 23, 2012 na6: 20 PM
Nehurombo, haina kutaridzika kunge peji rezvenhau rekuburitsa rine icho chinhu - isu tiri kungoshandisa iyo WordPress dialog yakavakirwa mukati. Tinogona kutarisa kuzviita sarudzo pane iyo plugin, hazvo! Pakati pazvino uye ipapo, zvinokwanisika kuti uzviite nejQuery kana uine ruzivo rwekuita budiriro.
Gumiguru 23, 2012 na6: 38 PM
Ndakaedza izvo zvakashanda nemamwe plugins, asi pasina rombo rakanaka. Chero mukana iwe waunondiudza iko kwekuita shanduko, uye sei?
Tine sarudzo yekusarudza pane widget pani yekusarudza kana iwe uchida iyo link yakavhurwa muhwindo idzva.
May 21, 2013 pa 2: 33 PM
@janetmorrow: disqus iyo plugin yakagadziridzwa nekwaniso yekuvhura zvinongedzo muhwindo idzva. Bata yazvino vhezheni!
Zvita 24, 2013 na9: 47 PM
Kutenda plugin huru. Mubvunzo mumwe - Pane here sarudzo yekuve nezviitiko zviviri zveiyo plugin? Ndinoda kushandisa seti yemifananidzo mune imwe nzvimbo uye imwe seti yemifananidzo mune imwe.
Zvita 30, 2013 na12: 25 PM
Ini handioni kuti sei usinga - wakamboedza here?
Zvita 30, 2013 na1: 10 PM
Ingovandudzwa nechinhu kutanga nemufananidzo wakasarudzika!